नारी उपभोग गर्ने साधन मात्रै हो ?
बिहीबार, २४ फागुन, २०७४
आठ मार्च मनाईदै गर्दा अहिले पनि कयौं देशमा महिलालाई दास जस्तो ब्यवहार गरिन्छ । मानौ, महिलाहरु मानिस नै हैनन्, पशुलाई बरु राम्रो ब्यवहार होला तर महिलामाथि हदैसम्मको तल्लो ब्यवहार भईरहेको छ ।
महिलाहरुलाई उपभोग र भोगविलासको साधन मान्ने पुरुषबादी संस्कृति जताततै छ । विकशित होस् वा हाम्रो जस्तो पछौटे समाज नै किन नहोस्, महिलाहरुले आफ्नो शरीर र यौवनलाई तिनै पुरुषबादीहरुको निजी सम्पति बनाएर हदैसम्मको शोषण र दमन सहनु परेको यथार्थ सामुन्ने आउँछ । महिलालाई भेडा बाख्रा जसरी किनबेच गर्ने संस्कृतिलाई जब जरैदेखि उखेलिन्न, तबसम्म महिला मुक्ति असंभव छ । कहीं कतै महिलाहरुले उन्मत्त भएर समानताको कुरा गरे पनि समाजको गहन अध्ययन गर्दा त्यो मिथ्या सावित हुन्छ ।
आठ मार्चको प्रसंगमा यहाँ काम गर्ने महिला र काम नगर्ने महिलाहरुको अलग बर्ग विभाजन छ । सुखसयलमा रहेका महिलाहरुलाई जहिले पनि आठ मार्च जस्तै उमंगको अबस्था छ भने कामकाजी महिलाहरुलाई सुख र उमंगको दिन कहिल्यै आउँदैन । वास्तबमा महिला मुक्तिको कुरा गर्दा कुन बर्गको महिला भन्ने कुरा स्वतः उब्जिन्छ । आज पनि भक्तपुरको ईट्टा भट्टीमा काम गर्ने महिलालाई आठ मार्च े थाहा नै छैन र थाहा भएकाले पनि आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताले काममै जोतिईरहनु परेको छ । तर काठमाडौका महलमा बस्ने महिलाहरुलाई त्यो दुख र पीडा के थाहा । ईैट्टा भट्टामा काम गर्दा एकपछि अर्को बलात्कारको पीडा भोगेकि बालिकाको पीडा कुलिन महिलाहरुलाई के मतलव श्र त्यसैले महिलाहरुवीचकै बर्गभेदको अबस्था अन्त्य नगरेसम्म साँचो आठ मार्च आउँदैन ।
एउटी युवती भोलिका लागि आमा हो । प्रकृतिले नै यस्तो शारिरीक वनावट बनाईदिएको छ कि सन्तान उत्पादनको जिम्मा महिलाहरुकै हो । अनेक कष्ट सहेर १० महिनासम्म गर्भधारण गर्नु, बच्चा जन्माउनु, उसको पालन पोषण गर्नु महिलाकै जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा प्रकृतिले नै भाग लगाईदिएको हो जस्तो देखिन्छ ।
एउटी युवती भोलिका लागि आमा हो । प्रकृतिले नै यस्तो शारिरीक वनावट बनाईदिएको छ कि सन्तान उत्पादनको जिम्मा महिलाहरुकै हो । अनेक कष्ट सहेर १० महिनासम्म गर्भधारण गर्नु, बच्चा जन्माउनु, उसको पालन पोषण गर्नु महिलाकै जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा प्रकृतिले नै भाग लगाईदिएको हो जस्तो देखिन्छ । यसमा धेरै पुरुषहरु दायित्वविहिन बन्छन् । उनीहरु भोग बिलास गर्ने, रोमान्स गर्ने र त्यसको दायित्व चाँही महिलालाई बोकाउने गर्छन । बराबरी त नारा मात्रै बनिरहेको छ ।
महिलाले सन्तान उत्पादन गर्दा जुन प्रसब पीडा हुन्छ, त्यसैले सन्तानलाई मायाँ गर्न उत्प्रेरित गर्छ र केही अपबाद छाडेर हरेक आमाहरु आफ्ना सन्तानलाई आफु भन्दा प्यारो ठान्छन् । आफुले नखाएर पनि सन्तानलाई खुवाउँछन्, आफु रोएर पनि सन्तानलाई खुशी राख्छन् र हसाउँछन्, आफु मरेर पनि सन्तानलाई बचाउंछन् । तर यत्तिको समर्पण पुरुषहरुमा कमै पाईन्छ । सबैलाई भन्न खोजिएको त हैन, धेरै पुरुषहरुमा आफ्नो सन्तानको मायाँ कत्ति हुन्छ तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेरौं, अबश्य फरक देखिन्छ ।
आज पुरुष कुनै कारणले बिग्रिए समाजले सहजै पचाईदिन्छ तर महिलाको चरित्रमा अलिकति पनि तलमाथिको अबस्था आउँदा धेरैले हेलां गर्छन । अनौठो कुरा के छ भने पुरुष मात्रै हैन, महिलाले नै महिलामाथि बिभेद र हेलां गर्ने, दुत्कार्ने प्रबृत्ति यहाँ छ । एउटा महिलाले अर्को महिलाको बदनाम गरिरहेको पनि कतिपय अबस्थामा देखिन्छ । त्यसैले यहाँ महिलाहरुको हकहितका लागि हामी महिलाहरु नै कति सचेत छौ र एकले अर्कोलाई कसरी सुरक्षा दिएका छौ, संरक्षण गरेका छौ भन्ने ज्वलन्त प्रश्न छ ।
कुनै महिलाले कुनै पुरुषसँग सम्बन्ध कायम गर्दा उसको घरमा श्रीमति छ कि छैन रु पहिले बिबाह गरेर धोका पो दिएको थियो कि रु म सौता बन्न जानुहुन्छ कि हुन्न रु पुरुषको बानी ब्यवहार कस्तो छ रु उसले मलाई जिन्दगीभरि साथ दिन्छ कि दिन्न भनेर कत्तिले सोच्छौ रु निकै गंभीर प्रश्नहरु हुन् यी । जब बर्बाद भईसकेको हुन्छ, हामी पछुताउन थाल्छौ र कुना पसेर रुन्छौ । पुरुषलाई धारे हात लाउनु अघि हामी महिलाले पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् ।
पछिल्लो समयमा महिला नै बिकृतिको बाहक बनेका हुन् कि भन्नेहरुलाई बल पुग्ने गतिबिधिहरु पनि भईरहेका छन् । खासगरी शरीर बेचबिखनका बढ्दो घटनाले महिलालाई भोग बिलास र मोजमस्तीको साधनको रुपमा हेर्ने पुरुषबादी सोचाईलाई बल दिएको अबस्था छ । कुनै बाध्यता नभए पनि ब्यभिचारमा लाग्नेहरुको गतिबिधिले महिलालाई गलत ढंगले हेर्नेहरुको संख्यामा बढावा दिएको छ ।
महिलालाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भोट ब्यांक र नारा जुलुस गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
महिलालाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भोट ब्यांक र नारा जुलुस गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । केही समय अघि भोजपुर, ईटहरी र काठमाडौकै दरबारमा मार्गमा जघन्य खालका बलात्कारका घटनाहरु भए र घटना लुकाउन र दोषीलाई उम्काउन प्रहरीकै संलग्नता देखियो । यी सवालमा कुन चाँही महिला संगठनहरुले नारा जुलुस गरे र दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन भुमिका खेले ?
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नाममा आज पनि राजधानीका पाँचतारे होटलहरुमा गोष्ठी, सेमिनार र कार्यक्रमहरु भईरहेका होलान् । देशको राष्ट्रपति समेत महिला भएको अबस्थामा पाँचतारे होटलहरुमा हुने गोष्ठीमा बिशिष्ट पाहुनाहरुको ठूलै जमघट होला । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जाने त्यस्तै बनिबनाउ कार्यक्रममा हो किनभने गरीवका झुपडी, खोलामा गिट्टी कुटिरहेकी महिला र ईट्टाभट्टामा पूग्न उनीहरुलाई सरकारी संयन्त्रले नै रोक्छ । गरीबहरुको बस्तिमा उनीहरुलाई सुरक्षा हुँदैन । त्यसैले आज यो देशका लाखौं कामदार महिलाहरुले कस्तो पीडा भोगिरहेका छन् भन्ने बारेमा ठूला बडाको दिमागले सोच्दै सोच्दैन । अनि कसरी नीति बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ ?
महिलाहरुलाई उपभोग र भोग बिलासको साधन मान्ने प्रबृत्तिमा परिवर्तन नगरेसम्म यहाँ वास्तविक समानता र न्याय कायम हुँदैन । लाखौं महिलाहरुले ३६५ दिन नै चर्को शोषण, दमन र यातना भोगिरहेका छन्, सिमित बर्गका महिलाहरुले एक, दुई दिन उफ्रेर मात्रै महिला समानता आएको मान्नु भ्रम मात्रै हो । समानता त्यतिखेर आउँछ जब एउटा महिलाले अर्कोलाई समान ठान्छ, पुरुषहरुको उपयोगबादी सोचमा परिवर्तन आउँछ र काम र जिम्मेबारीको आधारमा महिलाले समान ज्याला, सुरक्षा, आत्मसम्मान र अवसर पाउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले महिला आफै सचेत हुनु, आफ्नो ज्ञान, शीप र क्षमता बिकास गर्नु अनिबार्य छ ।